नेविसंघका नेताहरुलाई थर्काउँदै देउवाले भने- खै कहाँ छ नेविसंघ ? ‘जहाँ पनि हार्‍याहार्‍यैं छन् । लाज पनि छैन' - Gandak News
नेविसंघका नेताहरुलाई थर्काउँदै देउवाले भने- खै कहाँ छ नेविसंघ ? ‘जहाँ पनि हार्‍याहार्‍यैं छन् । लाज पनि छैन’
गण्डक न्यूज द्वारा १९ असार २०७७, शुक्रबार १४:०७ मा प्रकाशित 0
Sher Bahadur Deuba File Photo
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भाषण मात्र गर्दै हिँडेको भन्दै नेविसंघका नेताहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रममै थर्काएका छन् ।
पूर्वसभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ९६औं जन्मजयन्तीमा नेविसंघले शुक्रबार शान्तिबाटिकामा राखेको रक्तदान कार्यक्रममा देउवालाई बोलाइएको थियो । कार्यक्रममा साढे २ मिनेट सम्बोधन गरेका देउवाले नेताहरुलाई थार्काएका छन् ।
‘सोसल डिस्ट्यान्स भनेको छ, टाँसिएर बसेको छ यहाँ । लाज पनि छैन, बोल्दा ढंग पनि छैन’ भन्दै सम्बोधन सुरु गरेका उनले महामारीका बेला भाषणबाजीको कार्यक्रम नराख्न आग्रह गरे । खतरा रोग आएको भन्दै उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ कार्यक्रम नगरे पनि हुन्छ । ठुलो गाउँमा सानो कार्यक्रम गरे हुन्छ, अहिले सबैले कार्यक्रम गर्न छाडिसकेका छन् । हामीले मात्रै गर्नुपर्ने ? बढ्ता जान्ने भइहाल्नुपर्ने ? विद्यार्थीलाई जम्मा पारेर भाषण गरिहनल्नु पर्ने ?’
पहिरोले पधेँरो पुरेपछि पोखरा -३३ मा खानेपानीको समस्या
देशका केही स्थानहरुमा मेघगर्जन र चट्याङसहित बर्षाको…
कोरोना संक्रमणबाट पोखरा-१९ का ६२ बर्षीय पुरुषको मृत्यु
दरौंदी खोलाले बगाउँदा एकको मृत्यु, एक बेपत्ता
च्याम्पियन्स लिगः बार्सिलोना र बायर्न…
देशका केही स्थानहरुमा मेघगर्जन र…